Akwụkwọ ndị ọbịa | Holmbygden.se
Mmadụ Bịa dee ọ bụla akara na-ahapụ gị akara n'okpuru Akwụkwọ ndị ọbịa.
Akwụkwọ ndị ọbịa bụ n'okpuru esenowo ọnụ ọgụgụ nke Holm district kasị-gara peeji nke. Otú ọ dị, ọ bụ kwa mgbe onye na-ede ihe. Welie olu gị!
Nkume a ekele ma ọ bụ na-ekwu ihe ị na-eche banyere ihe i nwere n'uche!
0 echiche on "Akwụkwọ ndị ọbịa”
Gun Lundgren on 12 June, 2016 na 13:51 kwuru:
Dị ka a mụrụ Holmbo ulo Östbyn ruo mgbe ụlọ akwụkwọ malitere, M na-eche na-ekpo ọkụ n'ihi na Holm. Ka nwere ndị enyi na enyi n'ime obodo ma ọ dị ka n'ụlọ mgbe m ga-esi e. Ekele si Gun.
Rockabilly Nupụrụ Sundsvall on 30 Ka, 2015 na 19:26 kwuru:
Hi. Holmbygden. Dị nnọọ chọrọ mesie na N'etiti ọkọchị Zute gaghị eme nke a afọ. Ọ dị mwute na ọ pụrụ iyi ee. Ma mgbe ndị kwesịrị na-akwọ ụgbọala ihe na iteto, Na ọbụna na-edina banyere ihe, Ord.vakter Bet, ọnọdụ uche, wdg. Mgbe ahụ, ka anyị kama N'etiti ọkọchị Zute ịga Graven..Rockabilly Nupụrụ Isi .
Mgbe bu n'obi duhie / ịfụ ọ bụla .Därmed anyị na-ekele anyị na-enwe olileanya i nwere ike inwe ihe ọzọ a na district nke nwere ike na-arụ ọrụ mma karịa ihe anyị na-agbalị
Ụdị o n'Eziokwu Greetings
ROCKABILLY nnupụisi Sundsvall
Anyị na-ekele ha maka 2 Kara aka na ha nọ .
Holmbygden.se on 2 June, 2015 na 23:22 kwuru:
Hej alla Rockabilly Nupụrụ Isi,
Ọ bụ site na nweko ayi nnọọ na-agwụ ike (!) na-anụ banyere ya na bụ dịtụ N'etiti ọkọchị Zute na Holm. Mwute ịnụ gị akụkọ. Ma ọ bụghị ya, e a nnọọ ekele iniative na ndokwa na fun na niile ọbịa ime obodo.
Ekele maka ọrụ niile ị na-etinye ala!
Holm district nke Development
Lina Näslund on 15 April, 2015 na 18:14 kwuru:
Hi! M na-ebi ebe a n'ime obodo na nwa oge na manufactures ọla
Na obere ọzọ ga-onye ọ bụla good mmasị a tour? Onye ọ bụla mara
Onye ọ bụla ka ihe atụ nwere ike ijide a n'abalị? ezi obi na-Lina superlina84@hotmail.com
Soren Olofsson on 14 December, 2013 na 12:36 kwuru:
Daalụ maka niile Ama si Holm!
Holmbygden.se on 16 December, 2013 na 10:01 kwuru:
Nnọọ na-akpa ọchị na-anụ na anya ọbịa ekele ma na-eleta anyị na saịtị!
Karl Blomberg on 26 April, 2012 na 08:30 kwuru:
Ekele na a oké website!
Ugbu a ị ga-n'ekwusa URL ka ihe atụ, site na ihe ịrịba ama na ihe niile ntinye isi ka Holm district.
Holmbygden.se on 26 April, 2012 na 14:35 kwuru:
Ee, echiche atụkwasịla anyị na. N'ihi ya, anya, Otú ọ dị, ọ dịghị ụdị ihe mere – a ọrụ na-na-mere site onye… Anyị nwere obi ụtọ ruo mgbe niile na-enyere aka n'ahịa anyị onwe anyị, n'ihi na otú ahụ dị nnọọ ka ọ na-agbasa naanị site n'asụsụ ógbè na internet n'ozuzu.
Daalụ maka aro!
Peter Lindeberg na Skåne on 6 February, 2012 na 11:45 kwuru:
Ọ bụ oké na-enweta ihe email na Ulla Lindenberg ọhụrụ Internet saịtị si Holm district. Ọhụrụ na ozi ọma na-ede, ị ga m ma si Oku Carl-Heinrich Smuzzler (ewela na mkpoputa) mgbe ọ fastidiously ulo oru akwụkwọ ozi na facile ahịa “Nix Pix” na “Costa Free”. The epupụta ndị dị mma nke ukwuu na-agụ banyere dum district. Ya mere, m na-atụ anya na ọtụtụ ndị a iche iche Gburu.
Daalụ maka a oké saịtị na m ugbu a sonyere debanyere aha.
Peter-akpa si Vikholms i Anundgård
Roland Hultman on 12 January, 2012 na 08:56 kwuru:
Always fun na-agụ banyere ihe na-eme m ozugbo gburugburu dị ka a ezumike nke dị na-agụ banyere ihe na-eme na Central akụkụ nke obodo.
Kudos gị onye na-ejisie a anyị bụ ndị nwere mmasị, olileanya na ị na-enyemaka iji na-emezu nke a.
Holm district bụ ebe kasị mma m na na na na n'oge m karịa 60 – afọ ndụ otú anya na ga-eleghị anya ịnọgide otú….
Niklas on 30 November, 2011 na 18:41 kwuru:
HBU Ekele maka ọrụ niile ị na-etinye ala anyị ebe a na obodo! =)
#31 anwale ọhụrụ Akwụkwọ ndị ọbịa feature =)
20-24 maj mellan ca 09:00-15:00 är det förän... GỤKWUO